Steam Rooms mushure mekuvhima
musha » Blog » Mabivha Emvura Pashure Pekuita Basa
Kudzidzira nekushanda kunze kwakakosha zvinhu zvekuchengetedza zvakakosha nekugara wakagwinya. Zvisinei, nguva dzose uye kushanda nesimba kunogona kuva kunotyisa, uyewo kukusiya iwe uchitambudzika uye uchitambudzika. Izvi zvinoreva kuti, zvakakwana, kupora kunogona kuve kwakakosha sekuita basa racho pacharo; kuti uzo kuwedzera kubudirira kwekupora kwako, chiito chinoda kutorwa pakarepo. Kunyange zvakadaro, pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvaunogona kuita munyaya iyi, sekushandisa shanduro, kuisa muviri, uye kudya kudya kwakakodzera, tichazove kuisa pfungwa pamusoro pezvipo zvekugadziriswa kwemahofisi emvura inoshandiswa.
Chokutanga uye chakakosha, kushandiswa kwemukati wemhepo kunoderedza kusagadzikana uye kuneta mumatumbo ako; pamwe neiyi, inoderedzawo kuneta kwepfungwa nekudzvinyirira. Kuva muchitoro chemhepo kunomutsa kutonhora kwemuviri wako zvichiita kuti mishonga yako yeropa iwedzere (yakawedzera). Kuwedzerwa kwemidziyo yako yeropa kunoita kuti kuwedzerwa ropa kuwedzere kumativi ako. Izvozvi, zvinoreva zvinosuruvara zvine zvakawanda zvekushandisa oksijeni nemuviri, zvichibatsira mumasimba kugadzirisa. Iyo inobatsirawo mukukurumidza kubviswa kwezvinhu zvakasvibiswa kubva pamisimba yakanyatsoshanda, pamwe nemasero emuviri ekudzivirira muviri. Aya masero machena eropa anodiwa kuti aparadze mamwe masero asingagoneki (uye tsvina) asi anogona kukanganisa masero ane utano kana aripo kwenguva yakareba.
Mukuwedzera pakuderedza kusuruvara nekuvandudza kugadzirisa kuwedzerwa, kushandiswa kweimba yemhepo kunowedzera muviri wako wekugadzirisa muviri. Zvakare, izvi ndezviitiko zvekusimudzirwa kwekusimudzwa kwekushisa kwemuviri wako. Pamusoro pokupedzisa muviri, muviri wako unotengesa muviri unowedzera kwemaawa mashomanana anotevera. Izvi zvinoreva kuti, pane zvose, iwe unopisa simba (makoriri) nokukurumidza muhupenyu hwekuzorora kupfuura iwe zvaunowanzoita. A post-workout steam room session rinogona kuwedzera urefu hwenguva iyo simba rako remasabolism rinoramba riri mumamiriro ezvinhu akawedzerwa. Ichi maximizes kubudirira kwesimba rako rekugadzirisa muviri uye kunonyanya kukosha kana chinangwa chako chekudzidzira chiri kuderedza uremu.
Kune avo vanoita mukutonhora kwemamiriro okunze, kunyanya kukosha panguva ino yegore, kushandisa imba yemvura inogona kuva nezvimwe zvikomborero zvausingafungi. Nzvimbo dzemakamuri dzinobatsira kuderedza kusanganisa uye kubvisa kukwezva, migumisiro yakaipa yekuvhima iyo isinganzwi (kunyanya munguva yechando). Kushungurudza kunorwadza, kana kuti 'kutsva' kunzwa, kune chiitiko chisingawanzoitiki. Zvisinei, zvinopesana nedzidziso yakakurumbira iyi haisi mhinduro yemhepo iri kutonhora, inonyanya kukonzerwa nehurombo hwakakura hwe hydration. Kushandisa mudziyo wewaini kunobatsirawo kuderedza izvi zvisingadiwi, uye kusanzwisisika, kumativi-ega. Izvi zvakaderera kusvika pakuderera kwemhepo mumhepo yemakamuri emvura, uye kubudiswa kwemvura kunopisa mukati mehuro. Izvi zviratidzo zvinotyisa zvichave zviripo unozivikanwa kune avo vese vane astmma, zvinoreva kushandiswa kwemashure-kushandiswa kweimba yemujuru kunokurudzirwa zvikuru.
Steam rooms 'yakawanda kwazvo yakawanikwa inobatsira ndeyokuti inobatsira mukutora simba remuviri wako. Iye zvino apo ichi ichokwadi, kushandisa imba yemvura hazvizobvise muviri wako wehuseyi huripo. Inzvimbo yefambisi inobatsira kubvisa tsanangudzo yezvinhu (zvishoma kupfuura 1%) yehupfu hunobva pamuviri wako. Kunyange zvakadaro, chirongwa chemukati chemukati chinobatsira zvikuru mukudzikisa kweganda, uye kuchenesa iyo isina kuchena. Kupikira ndeimwe yemitoo yako yemuviri yekuzvichenesa wezvinodhaka, panguva yekurovedza muviri kunofamba nenzira yemuviri wekunotonhora; sezvo soxini yakadaro inomanikidzwa kunze kwemuviri, asi ichivakira paganda sezvainooma. Icho kupisa uye chinyoro chemuguru wemhepo hazvibvumi kuti jira riome, zvichizadzisa kuchenesa kweganda rako. Izvi zvinogumawo mukudzoka kweganda, uye kunogona kubatsira kukurudzira chero dermatologic nyaya dzaungave nadzo.
Pakupedzisira, kushandiswa kwemakamuri emhepo kunokonzera hyperthermia kuburikidza nekusimudzwa kwekushisa kwemuviri wako. Hyperthermia inzira inobatsira yekuuraya chero mimwe mitumbi yekunze kana zvipenyu izvo zvinogona kuvapo mumuviri wako; sezvo vasingakwanisi kupona pazvinhu izvi zvinotonhora zvakakura. Somuenzaniso, kana iwe uine fivhiri muviri wako unomutsa ushuhuro hwayo kuitira kuti urwise utachiona. Takatotanga kugadzirisa mhinduro yekuzvimiririra yakakonzerwa nekurovedza muviri, zvinoreva kuti muviri uri kuto 'kurwisana' kuti uve wakasimba sezvinogona. Saka kushandiswa kwemukati mushure mekushanda kuchaita kuti uwane mikana yekuwirwa nehutachiona, kunyange zvazvo isina kubvisa kuvapo kwezvinhu zvose zvekunze.
Iyi chinyorwa chaipiwa naSam Socorro kubva Sensual Spas. Sam muongorori munyori muhutano hwehutano nehutano uye ave achinyora nekudzidza nyaya dzakadai seyi kune makore anopfuura 10.